Yintoni i-SEO eneNjongo yokuThengisa?
Ukuthengiswa ngenjongo yonke into ngokudibanisa i-SEO kunye nomxholo. Xa udibanise ngokukhalipha, i-SEO kunye nokuthengiswa kokuqukethwe kuba isikhali esingenakulinganiseki esinceda ibhizinisi lakho liphume kwisihlwele sabantu abakhuphisanayo.
Ngo-2017, intlanganiso kunye nokuguqulwa kwemfuno yabathengi konke malunga nokwenza uphawu lwakho lubonakale, lukholisa kwaye lunqwenela kubathengi. Nangona abaninzi abantu bathanda ukucinga ukuba ukhetho lwabo lusekelwe kwiingqinisiso kunye nengqiqo, iimvakalelo zidlala indima ebalulekileyo ekwenzeni izigqibo zansuku zonke - my amsterdam. Abantu bavame ukukhumbula amava, kungabikho umbhalo. Yingakho ukuvelisa itekisi ehambelana nabaphulaphuli bakho kukubalulekileyo kwintsebenziswano.
Isiqulatho siPhambili seMveliso yeSicwangciso seNtengiso se-SEO
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuthengwa kwe-intanethi kuye enye yeendlela ezikhethiweyo zokuthenga. Esi sizathu esona sizathu sokuba umxholo wakho wewebhusayithi ufanele ulungiswe kangangoko kunokwenzeka ukubandakanya nokukhangela abakhweli abathengi apho bekhona. Ngethamsanqa, unokufikelela lula kule njongo ngokudibanisa i-SEO kunye nemigudu yokumaketha kwinqulatho yomsebenzi omnye.
Khumbula, ukucwangciswa kwenjini yokukhangela kubalulekile ekufumaneni kokuqukethwe. Into yokuqala okufuneka uyenze ukuchonga amagama angundoqo achaza intengiso yezoshishino. Olu datha luyakunceda ukuba uqonde kakuhle injongo yabathengi, okuza kukunceda ukuba uvelise umxholo wasezantsi onokuguqula.
Indlela yokudibanisa i-SEO kunye nokuThengiswa kweNkcukacha?
Gcina ingqalelo: ukuphuhlisa inkqubo yokwenza umgangatho osebenzayo kuthatha ixesha kunye nemizamo. Iingcali ze-Semalt zincoma ukuba uqwalasele la maqhinga xa ukhetha isicwangciso sakho sokucwangcisa umgangatho opheleleyo:
Ukwazi Abaphulaphuli bakho kuYimfuneko
Le ndelayo yinto ebaluleke kakhulu ukuyikhumbula: kubandakanywa nemveliso, inkonzo, amava kunye nesicwangciso sokuthengisa, kufuneka sibhekiselele kumxhasi. Ukuchaza abaphulaphuli abajoliswe kuyo kukunceda udale umxholo onomdla kwizihloko ezichaphazelekayo ekujonganeni kakuhle neemfuno zabaxhasi bakho.
Umthetho wegolide: ukuba uqonda izizathu zabaphulaphuli bakho, kukho amathuba amaninzi okuza kunika umxholo ochaphazelayo onceda ukukhulisa imali, ukunyusa ukuqhubela phambili, nokunyusa ukuzinza kwexesha elide.
Ukubaluleka kokuQinisekiswa kokuQinisekisa
Qaphela: yonke into enomxholo oyenzayo kufuneka ibe nesizathu sokuba. Ngokuqhelekileyo, injongo yomxholo ukukwazisa, ukufundisa nokuzonwabisa. Gcina injongo yengqondo xa udala isicwangciso somxholo.
Isinyathelo esilandelayo silungiselela umxholo wokubonakala okukhulu. Iingcali ze-Semalt zincoma ukuba usebenzise ezi ngcebiso xa ulungiselela umxholo wakho wewebsite:
Khetha izihloko ezithandekayo nezifanelekileyo ezibheno ngokusekelwe kwiminqweno, ukuziphatha, kunye neenkcukacha zabantu;
Hlanganisa amagama abalulekileyo;
Ukuphucula umxholo wakho kumadivayisi eselula.
Esinye isiphakamiso kukugxila kumgangatho, kungekhona ubuninzi. Khumbula, umxholo okongezelelweyo awuthethi umxholo ongcono. Kucacile ukuba abantu bafuna ukutya umxholo okhethekileyo, ochaphazelekayo, kwaye uncedo kubo.
Ukulinganisa iziphumo zakho zoMsebenzi ongcono
Njengoko bethetha, into engalinganiswayo ayikwazi ukuphuculwa. Ngethamsanqa, le mihla unokukwazi ukubona i-ROI yakho ngokulula ngokulandela amathrikhi kunye nokufumana ubungqinisiso bokusebenza komxholo kwimiba encinane yokuchofoza.
Unokufunda kuyo yonke imiphumo yomxholo, nokuba ingafezekanga okanye ayiphumelelanga iinjongo zayo. Ukulinganisa kunye nokubeka iliso kukuncedisa ukuba yintoni eyenza umxholo wakho ogqwesileyo uphumelele. Ngokwenza njalo, unokuphinda uphendule iindlela eziphumelelayo, ngoko uphucula isicwangciso sakho sokuthengisa se-SEO.
Njengoko ubona, ukudibanisa i-SEO kunye nokuthengiswa kokuqukethwe ngenye yezona ndlela ezilungileyo zokunyusa isayithi yakho yendlela kunye nokutsala umgangatho ophezulu. Landela amaqhinga akhankanywe ngentla uze ubone ukuba kwenzekani kwiziko lakho lewebhu!